အန်းဒရွိုက် 10 များအတွက် Gmail ကိုများအတွက်အမှောင် Mode ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » Gmail ကိုအဘို့မှောင်မိုက် Mode ကိုဒီနေရာတွင် Is, ဒါပေမယ့်သာလျှင်အန်းဒရွိုက် 10 အသုံးပြုသူများသည်
Gmail ကိုအဘို့မှောင်မိုက် Mode ကိုဒီနေရာတွင် Is, ဒါပေမယ့်သာလျှင်အန်းဒရွိုက် 10 အသုံးပြုသူများသည် APK ကို
Gmail ကိုအဘို့မှောင်မိုက် mode ကိုဤနေရာတွင်နောက်ဆုံးတော့သည်နှင့်သင်ယခုမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ရန်သင့် Gmail ကိုနောက်ခံဖွင့်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ Gmail ကိုဦးဆောင်သည် Google apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်လို့ယူဆတယ်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များလည်းနည်းနည်းပိုမိုမြင့်မားများမှာရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ မှောင်မိုက် mode ကို၏နိဒါန်းပိုမိုမြင့်မားနေရာအပိုင်းအခြားအထိရှိပြီးအဆိုပါ themes များကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့စေသည်။
ဒီမှာသာစိတ်ပျက်စရာအရာကယခုမှသာဟာ android 10 အသုံးပြုသူများအတွက်သာရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Google က Gmail app ကို android ဖုန်းနှင့်လည်းပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးစမ်းသပ်ခြင်း၎င်း၏မှောင်မိုက် mode ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတူပြုတော်မူပြီ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးပြုသူများကိုယခုအလွယ်တကူနောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များခံစားရန် 2019.08.18.267044774 ၎င်းတို့၏ Gmail အကောင့်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူများကိုအောင်မြင်စွာ Gmail ၏နောက်ဆုံးပေါ် mode ကိုဝင်ရောက်ဖို့က Android 10 ၎င်းတို့၏ဟန်းဆက် upgrade ရန်ရှိသည်။ သငျသညျဟာ android 10 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောရှိခြင်းလျှင်ဒီတော့သင်အလွယ်တကူ Gmail အကောင့်ဤနောက်ဆုံးပေါ်ထို့အပြင်ခံစားနိုင်။ ရယူခြင်းကဒီမှာအတော်လေးလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံအနည်းငယ်ကလစ်တစ်ကိစ္စနှင့်မှောင်မိုက် mode ကိုမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ရန်သင့်ဂျီမေးလ်ရဲ့နောက်ခံတက်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်စာပုံးဖိုလ်ဒါဆုံးနဲ့ အီးမေးလ်က ဒါ့အပြင်အဖြစ်ကောင်းစွာမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်မှတက်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
ယခင်ကတူညီသောလက္ခဏာအချို့ကိုတက်ပြကြပါပြီအဖြစ်မိတ်ဆက်မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ အမှောင်ဆောင်ပုဒ် Gmail ကိုဝစ်ဂျက်ကိုယခင်ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများ့ဖွင့်ဖို့မှောင်မိုက် mode ကို၎င်းတို့၏ယေဘုယျစနစ်ကဆောင်ပုဒ်သတ်မှတ်ရန်လိုသည်။
သာက Android 10 အပေါ်ရရှိနိုင်
Gmail ကိုအဘို့မှောင်မိုက် mode ကိုယင်း၏အပြည့်အဝ mode မှာရောက်ရှိမထားပါဘူးဒါပေမယ့်သင်ကလည်းအနည်းဆုံးတဦးတည်းကိုစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ အဆိုပါ updates များကိုတသမတ်တည်းရှိမိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။ လောလောဆယ်ဂျီမေးလ်၏မှောင်မိုက် mode ကို၏ updated version ကိုအန်းဒရွိုက် 10 အသုံးပြုမှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိတွင်အစောပိုင်းကဟာ android ဗားရှင်းကိုအသုံးပြုနေသူကိုလူတွေကဒီ feature ကိုရယူသုံးဘို့နည်းနည်းပိုရှည်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။
Google ကပြီးသားက၎င်း၏ app များကိုအများစုသို့ဤ mode ကို၏နိဒါန်းကတိထားတော်မူပြီ။ တိုတောင်းသောခုနှစ်တွင်, သင်ရုံအားလုံး Google က Accounts ကိုအပေါ်အပြည့်အဝ-အလုပ်လုပ် mode ကိုရရှိရန်ယခုတိုတောင်းအချိန်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ သငျသညျ Play Store မှနောက်ဆုံးပေါ် mode ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်မယ့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာရှိသေးမရရှိနိုင်အဖြစ်ပဲ, စောင့်ပါ။ အများအပြား updates များကိုလာနေဆဲအဖြစ် Google ရဲ့ခက်ခဲအားထုတ်မှုနေသော်လည်းအသုံးပြုသူများနေဆဲအချို့သောအချိန်များအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။
အရာတွင် tabs များမှောင်မိုက် mode ကိုလက်ရှိတွင်မရရှိနိုင်ပါသနည်း
မှောင်မိုက် mode ကိုနေတုန်းပဲသွားရမယ့်တာရှည်လမ်းရှိကြောင်းကို Google ၏ updated နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစိတ်ဝင်စားဖို့အသုံးပြုသူများကိုလွယ်ကူစွာမှောင်မိုက် mode ကိုသူတို့ရဲ့က Android 10 ကို update နိုင်ပါတယ်။ မှောင်မိုက် mode ကို Google ကတသမတ်တည်းကကို update နှင့်ဤအရပ်မှသင်တို့ကို Play Store ကိုပေါ်ရဖို့နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပျစသညျ, Chrome Youtube, ဆက်သွယ်ရန်, ဖုန်း, Snapseed အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းလက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အသုံးပြုသူများကအလွယ်တကူအောင်များအတွက် Google က Menu ကိုအတွက်အထွေထွေ Settings option ကိုအတူတူ updated သိရသည်။ သင်ရုံသင်သည်သင်၏ဂျီမေးလ်ဆောင်ပုဒ်အလင်း, အမှောင်, ဒါမှမဟုတ် System ကိုပုံမှန်ဖြစ်လိုခြင်းရှိမရှိကို select ရန်ရှိသည်။ သငျသညျအဆုံးစွန်၏အောင်မြင်သောရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူပြုပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ယေဘုယျစနစ်ကဆောင်ပုဒ်ကိုအောင်မြင်စွာ updated ရပါလိမ့်မယ်။
အသုံးပြုသူများ updates များကိုအဘို့ကိုပြုပြီးတာနဲ့နောက်ခံချက်ချင်းမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်သို့လှည့်ပါလိမ့်မယ်။ စာသားအချို့အပြာအသံထွက်ကိုလည်းပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်ကဒီမှာအဖြူသို့မဟုတ်အလင်းမီးခိုးရောင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောမှောင်မိုက် mode ကိုအတူလုပ်ကိုင်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်အေးမြအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ။ ဒါဟာတကယ်ပေါ်မှာအဖြူသို့မဟုတ်အလင်းမီးခိုးရောင်အရောင်စာလုံးရှိခြင်းနေစဉ်မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်နောက်ခံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အတော်လေးပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က Android 10 ရှိခြင်းပင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသူတို့ရဲ့ Gmail ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နေချိန်မှာအသုံးပြုသူများရင်ဆိုင်ရပေလိမ့်မည်။ ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အချို့ကိုသင်လက်စွဲလုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်နှင့်အမြစ် access ကိုဒီမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
/data/data/com.google.android.gm/shared_prefs/FlagPrefs.xml တှငျစစျမှနျသောဖို့ DarkThemeSupport_dark_theme_supportboolean အလံတက်သတ်မှတ်မည်။
ပြီးတာနဲ့အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူပြုချက်ချင်းဖိုင်ကို save ဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။
တပ်ဖွဲ့အတွက်ပိတ်ဖို့ Gmail app ကို သင့်ရဲ့ Android 10 အပေါ်အောင်မြင်စွာ mode ကို run ဖို့။
ကို Android 10 မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်အဘယ်သို့ပြုရပါသနည်း?
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ဖော်ပြထားတယ်အဖြစ်က Android 10 မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်မှောင်မိုက်ထဲသို့သင့်ဂျီမေးလ်ရဲ့တောက်ပတဲ့အဖြူရောင်မျက်နှာပြင်ထပြန်သွားလေ၏။ စာသားအလင်းမီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အဖြူပြောင်းပါလိမ့်မယ်သော်လည်းနောက်ခံမှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ပြောင်းခံရပါလိမ့်မည်။ အသစ်များ mode ကို၏နိဒါန်းဟာကြည့်လုပ်လွယ်ကူတောက်ပ screen ပေါ်မှာအကြောင်းအရာဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ယခုညဥ့်အချိန်သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှာသူတို့ရဲ့မေးလ်ထွက်ဖတ်ရှုဖို့အခြို့သောအပိုအားထုတ်မှုအပေါ်ဆပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
မှောင်မိုက် mode ကိုယခုတိုင်အောင်မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်သို့ပင်မမျက်နှာပြင်, app ကိုအံဆွဲနဲ့ interface ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ သို့သော်မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်ကိုအလွယ်တကူတစ်ခုတည်း switch ကိုမှစီစဉ်ထားနိုင်ပြီးအလွယ်တကူထပ်မံမှောင်မိုက်ဆိုးကျိုးများသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ non-ဇာတိ apps များနေတုန်းပဲဒီ feature အတွက်ပြတ်လပ်နှင့်သုံးစွဲသူများကနောက်ဆုံးတော့ ပေး. စီရင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကို option ကိုအတွက်လွယ်ကူသောကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူအတော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။
သင်ဆဲအမှောင် Theme ရန်သင့် Gmail ကို update လုပ်ဖို့အဘယ်ကြောင့်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, ဒီမှာအတူတူပင်၏ဦးဆောင်အားသာချက်များရှိပါသည်။
အန်းဒရွိုက် 10 ဆိုလိုသည်မှာအမှောင် Mode ကိုများအတွက်ဂျီမေးလ်၏နောက်ဆုံး update ကိုအလွန်အေးမြလှပါတယ်။ ယခုသင်အလွယ်တကူပြုလုပ်နှင့်သင်၏စတိုင်လဒ်တက်မြင့်နိုင်ပါတယ်။
မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်၏မိတ်ဆက်အရောင်ပြောင်းပြန်လှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြီးမြတ်သောအတိုင်းအတာအထိစာဖတ်သူရဲ့မျက်စိပေါ်တွင် strain လျော့နည်းစေသည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အချို့ထက်ပိုတက်ကထပ်ပြောသည်။ OLED pixels ကိုအလွန်အနည်းငယ်သည်ဖတ်နိုင်တဲ့ဆည်းပူးရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကွောငျ့သငျ၏စမတ်ဖုန်းများ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအလိုအလျောက်ကြာရှည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မှောင်မိုက် mode ကိုတကယ်အနိမ့်အလင်းဒေသများရှိအကြောင်းအရာများ၏မြင်ကွင်းတိုးမြှင့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောနေရာလေးကို option တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဦးစားပေးနှုန်းအတိုင်းအပေါ်ကကို turn off အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
Gmail ၏နယူးအမှောင် Mode ကိုချိန်ညှိမှုများရရှိရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျ Gmail ကိုများအတွက်အမှောင် mode ကို၏အံ့သြဖွယ် features တွေနှင့်အတူတကယ်သဘောကျတယ်ရှိပါသလား? သငျသညျနောက်ဆုံးပေါ်မော်ကျူးရန်သင့်ဂျီမေးလ်ကို update လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ပါသလား? ဟုတ်သည်ဆိုပါက, ဒီမှာငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ဖြစ်ကြသည်။ မှောင်မိုက် mode ကိုယခုက Android 10 အပေါ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ မှောင်မိုက် mode ကိုထောက်ခံမှုတိုးချဲ့ကျီစားနေသော်လည်းအမှောင်ထဲမှာ themes များလက်ရှိအမျိုးမျိုးသော Google က app များကိုမချို့တဲ့ဘဲစေ့စပ်နေကြတယ်။ မှောင်မိုက်ဆောင်ပုဒ်လည်းသင့်ရဲ့ Gmail ပေါ်တွင်ပျောက်ဆုံးလျှင်ပဲအတူတူပင်ဆည်းပူးဖို့ထောက်ပံ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပေါ်လိုက်နာပါ။
သင့်ရဲ့ Gmail ကိုနောက်ဆုံးပေါ်မှောင်မိုက် mode ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ updated Gmail ကိုဟာ android app ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်သုံးခု stacked လိုင်းများ "ဟမ်ဘာဂါ" option ကိုအပေါ်ထိပုတ်ပါ။
ပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှု, ယခုအထွေထွေ Settings option ကိုနှင့်အတူရှေ့ဆက်ပြီးတော့အဲဒီမှာအဓိကအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် option ကိုရှာပါ။
သငျသညျဟိုမှာက Settings piton ကြည့်နေကြလျှင်ယခု, ပဲကအပေါ်တစ်ဦးကလစ်ပါစေ။
အလင်းသို့မဟုတ်အမှောင် Themes အကြား option ကိုရွေးပါသို့မဟုတ်သင်တို့သည်လည်း System ကိုပုံမှန်၏ထို option များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်ရှိ operating system ကိုအဆငျ့ဆောင်ပုဒ် settings ကိုလိုကျနာဖို့ app ကို enable ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတာနဲ့ပြုနောက်ဆုံးပေါ်အမှောင် Mode ကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ Android 10 အပေါ် updated လိမ့်မည်။
Clone App - အက်ပလီကေးရှင်း
Gmail ကိုအဘို့မှောင်မိုက် Mode ကို Gmail ကိုအမှောင် Mode ကို Android ပေါ်မှာ Gmail ကိုအမှောင် Mode ကို
အောက်တိုဘာလ 12, 2019 မှာ 5: 00 နံနက်